फुटबल मेरा लागि सपना होइन, बाध्यता थियो :: Setopati
फुटबल मेरा लागि सपना होइन, बाध्यता थियो हामीले प्रतिष्पर्धीसँग मात्र होइन, तिरस्कार र घृणासँग पनि लड्नुपर्छ
एन्टोनियो रूडिगर जेठ २८
(सम्पादकीय नोट : एन्टोनियो रूडिगर जर्मनीका राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी हुन्। उनी इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब चेल्सीका सेन्टर ब्याक पनि हुन्। चेल्सीले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि उचाल्नुअघि उनले रंगभेदका विषयमा मे २७ मा द प्लेयर्स ट्रिब्युनमा आफ्नो भोगाइ बताएका थिए। यो उनको उक्त भागाइको भावानुवाद हो।)
उनीहरू मलाई 'काले हप्सी' भनेर बोलाउँदै थिए। चिच्याइचिच्याइ मलाई 'केरा खान्छस्' भन्थे। जबजब म बलमा खुट्टा पुर्‍याउँथे, उनीहरू बाँदरको आवाज निकाल्थे र मलाई जिस्काउँथे।
यस्तो गर्नेहरू थोरै थिएनन्। सन् २०१७ को डर्बी डेला क्यापिटेलामा लाजियो क्लबको धेरै फ्यानहरूले मलाई रंगभेद गर्दै जिस्काए। इटालीका दुई फुटबल क्लब रोमा र लाजियोबीचको प्रतिस्पर्धालाई डर्बी डेला भनिन्छ।
मेरा लागि त्यो पहिलो रंगभेदी टिप्पणी थिएन। तर मैले भोगेको सबैभन्दा खराब थियो। त्यसैले मलाई साँच्चै चोट पुर्‍यायो। मेरो मुटु छियाछिया पार्‍यो। म उनीहरूको आँखामा रंगभेद देख्न सक्थें।
त्यो दिन मैले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ। म खेलपछि समर्थनलाई धन्यवाद दिन मैदानको पिचमा हिँडिनँ। म उनीहरूलाई त्यस्तो रंगभेद गर्ने थप अवसर दिन चाहन्नथेँ। आफूले आफूलाई भित्रैदेखि जति बलियो बनाए पनि यदि तपाईंको मन छ भने त्यस्ता घटनाले सधैँ घोचिरहन्छ।
रंगभेदका यस्ता घटनापछि सधैं विश्वभरको फुटबलले प्रतिक्रिया जनाउँछ। मान्छेहरू भन्छन् 'यो त अनि नै भयो।'
फुटबल क्लब र खेलाडीहरूले इन्स्टाग्राममा स्टोरी राख्छन्- रंगभेद अन्त्य गरौं।
मानिसहरूले यसरी प्रतिक्रिया जनाउँछन् मानौं त्यस्तो गर्ने केही सीमित मुर्ख हुन्। घटनापछि अनुसन्धान पनि सुरू हुन्छ। तर, त्यस्तो अनुसन्धानबाट खासै केही निस्कँदैन। क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा अभियान छेडिन्छ। अनि सबैले राम्रो महसुस गर्छन्। केही समयमा हामी साधारण दैनिकीमा फर्कन्छौं।
वास्तवमा कहिल्यै पनि रंगभेदमा परिवर्तन आएन।
जब युरोपका १२ वटा क्लबहरूले युरोपियन सुपर लिग गर्ने घोषणा गरे। त्यतिबेला फ्यानहरू सडकमा उत्रिए। मिडियामा व्यापक समाचार आए। खेलाडीहरू यसलाई रोक्न जागे। राजनीतिक स्तरमा प्रतिक्रिया आए। मात्र ४८ घन्टामा।
जब कुनै खेलाडीमाथि मैदानभित्रै रंगभेद हुन्छ त्यस्तो बेला विषय जटिल बन्छ।
हुनसक्छ, यो दर्शकदीर्घामा बस्ने केही मुर्खमामात्र सीमित छैन। हुनसक्छ, यसले युरोपको भित्रैसम्म जरा गाडेको छ।
म बेलाबेलामा इटालीका खेलाडी डी रोसीबारे सोच्छु। लाजियोसँगको खेलपछि उनी मलाई भेट्न आए। त्यतिबेला उनले जे भने त्यो मैले कहिल्यै सुनेको थिइनँ। म त्यो घटनाबाट अहिले पनि भावकु हुन्छु। त्यो दिन डी रोसी मेरो छेउमा आएर बसे। उनले कुराको सुरू गर्दै भने, 'टोनी, मलाई थाहा छ मैले कहिल्यै तिमीले जस्तो महसुस गर्नु पर्दैन। तर म तिम्रो पीडा बुझ्छु। तिम्रो दिमागमा के चलिरहेको छ भन्ने बुझ्छु।'
उनले त्यो दिन कुनै ट्‌विट लेखेनन्, कुनै चारपाटे कालो कोठा सामाजिक सञ्जालमा राखेनन्। किनभने उनलाई साँच्चै त्यसबारे चिन्ता थियो, चासो थियो।
फुटबल दुनियाँका धेरै मान्छेले धेरै विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्छन्। तर उनीहरू कहिल्यै पनि पीडित भएको ठाउँसम्म पुग्दैनन्। डी रोसीले साँच्चै मलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भन्ने जान्न खोजेका थिए। मेरा लागि त्यो व्यक्ति नै क्लबको आइकन थियो। साँच्चै फुटबलको लिजेन्ड। त्यसपछि जब म खेलबाट फर्केर ड्रेसिङ रूममा आउँथे, डी रोसीलाई देख्दामात्र पनि मलाई एउटा अबोध बालकको जस्तो महसुस हुन्थ्यो।
मेरा अप्ठेरा समयमा डी रोसीले साँच्चै मलाई मानवीय व्यवहार देखाए। उनले साँच्चै मलाई बुझ्न खोजे।
मैले यो सबै कुरा गरिरहँदा केही मान्छेलाई अप्ठेरो लाग्ला। मलाई थाहा छ यसै साता पूरा विश्वले च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल हेर्दैछ। तर म मेरो आवाज फुटबलको साँच्चै महत्वपूर्ण विषयमा उठाउन चाहन्छु।
रंगभेदको सवाल १० मिनेटको कुराकानीमा खत्तम हुने विषय होइन।
यो कुनै इन्स्टाग्राम पोस्टको क्याप्सन हैन।
यो मेरो जीवन हो।
के तपाईं मेरो कथा सुन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईं साँच्चै फुटबलको रंगभेद बुझ्न चाहनुहुन्छ?
म जर्मनीको बर्लिनको न्युकोलिन भन्ने ठाउँमा हुर्किए। त्यो आप्रवासी बस्ने ठाउँमध्ये एक हो। यस्ता शहर पेरिसमा पनि छन्। जस्तै पेरिसको ब्यानिलुअस। यस्ता शहरमा जन्मनेलाई एउटा कुरा थाहा हुन्छ- यदि कोही बुढाबुढी वा कोही महिला सडकमा झोलाभरी सामान बोकेर हिँडेको छ भने उसलाई सहयोग गर्ने प्रचलन हुन्छ। तपाईं जेसुकै काम गरिरहेको भए पनि रोकिने र त्यस्ता व्यक्तिको घरसम्म सामान छाड्न जाने प्रचलन हुन्छ।
म कुनै महिलाको छोरासँग भर्खरै फुटबल मैदानमा झगडा गरेर आएको भए पनि म ती महिलाको झोला बोकेर घरको ढोकासम्म पुर्‍याउन जान हिच्किचाउँदिनँ। आप्रवासी बस्ने शहरमा यस्तो संस्कार हुन्छ। हामी यसलाई हाम्रो कर्तव्य नै ठान्छौं।
चाहे हामी अत्यन्त नाजुक अवस्थामा गुज्रने परेको होस् वा त्यो ठाउँमा पीडा नै खेप्न परेको किन नहोस्। चाहे जस्तो परिवेशबाट आएको होस्, जस्तो समुदायको होस् वा जस्तो भाषा बोलोस् हामी छिमेकमा काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्छौं।
यो बेवास्ताको चिसो संसारमा मान्छेबीचको सम्बन्ध भने न्यायो रहन्छ। बालकका रूपमा यस्ता आप्रवासी बस्तीमा सबैभन्दा पहिला हामी सहयोगको संस्कार सिक्छौं, एउटा राम्रो संस्कार।
दुर्भाग्य, हामी राम्रा कुरामात्र सिक्दैनौं, कहिलेकाहीँ खराब पाठ सिक्छौं।
एक दिनको कुरा हो। म घर छेउको बाटो हिँडिरहेको थिएँ। मैले एक जर्मन महिलालाई बजारबाट भरिभराउ झोला बोकेर आइरहेको देखें। ती महिला मेरो हजुरआमाको उमेरकी थिइन्। एकदमै कमजोर। उनलाई झोला उठाउन कष्ट भइरहेको थियो। म उनको नजिक गएँ र भनें, 'झोला मलाई दिनुस्। म तपाईंको झोला बोकिदिन्छु।'
त्यसपछि जे भयो म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ। ती महिलाले मेरो अनुहार हेरिन् र डरले अनुहार भाव नै परिवर्तन गरिन्।
उनलाई लाग्यो होला- म उनको ब्याग चोर्न खोजिरहेको छु। साँच्चै उनी मलाई चोर सोचिरहेकी थिइन्।
त्यो त एउटा क्षण थियो, बिलाएर गयो। मेरा लागि त्यो क्षण फेरि फर्कने छैन। मेरो निर्दोशपनाको क्षण। त्यो पनि बिलाएर गयो।
सानै उमेरमा पहिलो पटक मेरो दिमागमा एउटा नमेटिने छाप बस्यो। 'ओहो मानिसहरूले त मलाई त्यसरी पो हेर्दा रहेछन्। म जर्मनीमै जन्मिएको हुँ। तर म केही जर्मनका लागि कहिल्यै पनि जर्मन हुन सक्दिनँ।'
एउटा तितो सत्य के हो भने जर्मनीले मेरो परिवारका लागि सबैथोक दियो। मेरा आमाबुवा शरणार्थी हुन्। सेरालिओनको गृहयुद्धबाट भागेर उनीहरू जर्मनी आएका हुन्। धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ के भएको थियो भन्ने जानकारी हुँदैन। किनभने त्यो अफ्रिका हो।
मान्छेहरूलाई थाहै छैन अफ्रिका के हो? उनीहरूको दिमागमा भोकग्रस्त ठूला पेट भएका बालबालिकाको दृश्य घुम्छन्।
किनभने उनीहरूले टेलिभिजनमा त्यहीँ देखेका छन्। तपाईंलाई ती दृश्यहरू देख्दा दु:ख पनि लाग्छ। तर केही सेकेण्डपछि तपाईं रिमोटले टेलिभिजन बदल्नुहुन्छ। वास्तवमै केही मान्छेहरूले बुझेको अफ्रिका यही नै हो। तेश्रो विश्व। बिर्सनलायक संसार।
यसलाई हामी 'रूखमा चढेको बिरालो' मानसिकता भन्छौं।
जब तपाईं गृहयुद्धबाट जर्मनीजस्तो राम्रो शहरमा आउनुहुन्छ, तपाईंलाई झट्का लाग्नसक्छ। तपाईंले टेलिभिजन खोल्नुभयो र समाचार हेर्नुभयो भने रूखमा बसेको बिरालो नै देख्नुहुन्छ। आफैं रूख पनि चढेको छ। अनि आफैं मज्जाले आराम पनि गरिरहेको छ।
तर तपाईं के गर्नुहुन्छ? प्रहरीलाई खबर गर्नुहुन्छ। उनीहरू अग्नि नियन्त्रण गर्ने गाडी लिएर आउँछन्। एउटा सानो बिरालोका लागि। मान्छेहरू त्यहीँ रूखका वरिपरि भेला हुन्छन्। केही त रून पनि थाल्छन्। अनि अग्नि नियन्त्रक भर्‍याङमा चढेर रूखमा पुग्छ। अनि बिरालोलाई निकाल्छ। बिरालोलाई ओढ्ने सिरक दिइन्छ। अनि एक प्याकेट दूध। सबैले ताली बजाउँछन्।
अग्नि नियन्त्रक हिरो कहलाउँछ। बिरालो पनि हिरो ठहरिन्छ।
तर तपाईंलाई थाहा छ, २० लाख मानिसले अफ्रिकामा गृहयुद्धका कारण घर छाड्नु पर्‍यो। त्यो त एउटा नम्बरमात्र हो।
मान्छेहरू बिरालोका लागि रून्छन्। तर उनीहरू अफ्रिकनलाई हेर्नसमेत चाहँदैनन्।
म फेरि पनि भन्छु: मेरो बुवा र आमा अहिले पनि जर्मनीप्रति अनुग्रहित हुनुहुन्छ। उनीहरूका लागि न्युकोलिन कुनै आप्रवासी बस्ने ठाउँमात्र होइन। उनीहरूका लागि त यो ठाउँ पृथ्वीमा भएको स्वर्गको एउटा टुक्रा हो। कुनै गोला बारूद नभएको। कुनबेला कहाँ बम खस्छ भन्ने चिन्ता नभएको ठाउँ।
पैसा थिएन। तर शान्त।
हाम्रा लागि धनी हुनु भनेको फरक कुरा हो। धनी हुनु भनेको पर्याप्त खाने कुरा हुनु हो। पिउनका लागि बियर अथवा यस्तै पेय पदार्थ हुनु। ठूलो टेबलमा ठूलो प्लेटमा चिकेन र भात। त्यो दिन धनी भएको महसुस होला।
मेरा लागि फुटबल कुनै सपना थिएन। यो मेरो बाँच्नका लागि बाध्यता थियो।
म कुनै धाराका पाइपहरू फिटिङको काम गर्न सक्थें। अथवा कुनै केक पसलमा पिठो मुछिरहेको हुन्थें। अथवा अधिवक्ता नै पनि हुन सक्थें। यी मेरो जीवनको बाटोमा प्राप्त हुन सक्थे।
म तपाईंलाई झुठो बोल्दिनँ। ठूलाठूला गाडी किन्ने सपना देखेर वा च्याम्पियन्स लिगको फाइलन खेल्ने सपना देखेर मैले फुटबल खेलेको होइन। मेरा लागि परिवारलाई शरणार्थीहरू बस्ने त्यो ठाउँबाट निकाल्नु थियो।
मलाई त्यो ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्ने महसुस कति बेला भयो भन्ने पनि ठ्याक्कै याद छ। म घरको भान्सामा थिएँ र मैले आमालाई थोरै पैसा मागें। सायद विद्यालयबाट भ्रमण जानका लागि थियो। मात्र केही युरो मागेको थिएँ। तर आमाले मलाई दिन सक्नुभएन।
मलाई त्यो घटनाले चित्त दुख्यो। मलाई आमाले पैसा दिइनन् भनेर चित्त दुखेको थिएन। मलाई उनको अनुहारमा झल्किएको अभावको भावले चित्त दुख्यो। म आमाको भाव पढ्न सक्थें। मैले आमाको आँखामा उनी मलाई पैसा दिने उत्कट चाहना देख्थें। तर उनले सकिरहेकी थिइनन्।
मलाई त्यतिबेला लाग्यो- अब म मान्छे बन्नुपर्छ। र मैले मेरो परिवारलाई यो दलदलबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यतिबेला ममात्र ८ वर्षको थिएँ।
यदि तपाईं कुनै आप्रवासी बस्तीको नजिक हुर्कनु भएको छैन भने तपाईंलाई मैले भनेको कुरा अलिक बढाइचढाइ गरेको जस्तो लाग्न सक्छ। तर तपाईंले त्यस्ता आप्रवासी ठाउँमा जानुभयो भने भन्नेछन्- आठ वर्षमा हैन ६ वर्षमै यस्तो मान्छे बन्ने अठोट लिनुपर्थ्यो।'
बाहिरका मान्छेहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो कुरा बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ।
जब थोमस टुचेल चेल्सी फुटलब क्लबको म्यानेजर बनेर आए। उनले मलाई एउटा रोचक प्रश्न गरे। उनी जर्मन थिए। तर हामी एक अर्कालाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैनथ्यौं। टुचेल क्लबमा आउनुअघि मेरा लागि चेल्सीमा सकसपूर्ण समय चलिरहेको थियो। जब टुचेल आए उनले मलाई कस्तो खलाडी हो भनेर ध्यान दिन थाले।
उनले मलाई भने, 'टोनी, म तिमीलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। जब तिमीलाई मैदानमा देख्छु एकदमै आक्रामक देख्छु। तिमी बडो भावनात्मक तरिकाले खेल्छौ। यो कहाँबाट आउँछ?'
त्यसपछि मैले उनलाई मेरो थोरै कथा सुनाएँ। मैले सायद उनलाई न्यूकोलिनमात्र भनेको भए पनि पुग्थ्यो।
त्यति मात्रले पनि उनले बुझ्न सक्थे।
म सानोमा घाँसे मैदानमा हैन ग्राभेल गरिएको मैदानमा फुटबल खेल्थेँ। मेरो फुटबल खेल्ने जुत्तामा प्वाल परेको हुन्थ्यो। ती जुत्ताहरू गोटी नभएका हुन्थे। म यति आक्रामक थिएँ कि मानिसहरू मलाई 'र्‍याम्बो' भनेर बोलाउथें।
म आक्रामक खेल्थें किनभने मलाई उनीहरूको अगाडि आफूलाई प्रमाणित गर्नु थियो। र, गरें पनि।
म बारम्बार एउटै कुरा सुन्थें।
उनीहरू भन्थे, 'तँ यहाँको होइनस्।'
तपाईं अन्दाज पनि गर्न सक्नुहुन्न। मैले कतिपटक यो सुनें। तपाईंलाई अन्दाज पनि छैन होला कतिपटक मान्छेहरूले मलाई 'अफ्रिका जा' भनेर भने।
तपाईंलाई थाहा छैन मैले कति पटक 'काले' भनेको सुनें।
आठ वर्षको उमेरमा मैले मेरो बुबालाई सोधें- यो 'काले' भनेको के हो?
मेरो स्कुलका केही बच्चाहरू जर्मन चकलेट खान्थे। त्योमध्ये एउटा चकलेटको नाम किस चकलेट थियो। तर उनीहरू त्यसलाई 'काले किस' भन्थे।
मलाई त्यतिबेलासम्म काले शब्दको अर्थ थाहा थिएन। अनि मैले घर आएर बुबालाई काले भनेको के हो भनेर सोधेको थिएँ। मेरो बुबाले जे जवाफ दिनुभयो। त्यो साँच्चै जानकारीमूलक थियो। आँखा खोल्ने थियो।
मलाई बुबाले भन्नुभयो - यो शब्दको अर्थ घृणा हो। तर ती स्कुलका बच्चाहरूले त्यो चकलेटको नाम काले किस भन्नुको कारण भने उनीहरूको बुबा आमाले वर्षौंदेखि घरमा त्यही भनेका कारणले हो।'
जब तपाईं काले भन्ने सुनेरै हुर्किनुहुन्छ। तपाईंसँग दुइटा विकल्प हुन्छन्। पहिलो, तपाईंले कसैले काले भन्दा बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, तपाईंले आफ्नो आत्मसम्मान रक्षाका लागि झगडा गर्नुपर्छ।
मैले कयौं पटक झगडा गर्नु परेको छ। मैले धेरै पटक यस्ता झगडामा रगत बगाएको छु। र त्यस्तो मानसिकतासँग भिडेर म फुटबलर बनेको हुँ।
त्यो आप्रवासी बस्तीबाट बाहिरिनु नै मेरो सपना थियो। र त्यसका लागि म जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार थिएँ।
म अर्को एउटा दिन पनि कहिल्यै बिर्सन्नँ। मैले १५ वर्षको उमेरमा बोरूसिया डर्टमन्ड एकेडेमीमा भर्ना हुन घर छाडें। मेरी आमा एक सातासम्म रूनुभयो। आमा मैले घर छाडेकोमा खुसी हुनुहुन्थेन। अहिले पनि म आमा रोएको सम्झेर भावुक हुन्छु। यसले मलाई पीडा दिन्छ।
तर मैले घर छाडेलगत्तै उनलाई भनें, 'यो घर छाडेको मूल्य एकदिन प्राप्त हुन्छ। हामी फेरि सँगै हुनेछौं।'
यसरी म घरको ढोका ढ्याम्म लगाएर निस्किएँ। म त त्यहाँबाट बाहिर निस्किएको थिएँ। तर मेरो परिवार अझै त्यहीँ थियो। मैले उनीहरूलाई पनि तानेर बाहिर ल्याउनु थियो। यो १३ वर्ष अघिको कुरा हो। तर मेरा लागि अझै पनि यो हिजोको कुरा हो।
मलाई कहिल्यै पनि विश्वास थिएन कुनैदिन म च्याम्पियन्स लिगको फाइलन खेल्नेछु भनेर। मसँगै ग्राभेल गरिएको मैदानमा फुटबल खेल्ने धेरै प्रतिभाशाली खेलाडी थिए। तर उनीहरू कहिल्यै त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सकेनन्।
न्युकोलिनजस्तो ठाउँबाट बाहिर आएर फुटबल खेल्दा अरू प्रतिभाशाली खेलाडीसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गरेर पुग्दैन। तपाईंले तिरष्कार र घृणासँग पनि लड्नुपर्छ। म जब जर्मनको स्टुटगार्टबाट फुटबल खेल्थें मलै कहिल्यै पनि सिधा रूपमा विभेद भोग्नु परेन। जति मैले इटालीमा भोगें। इटालीमा विभेद सुक्ष्म रूपमा गढेको छ।
जब तपाईंले केही खेलमा खराब प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। तत्कालै मिडियाले तपाईंको विगत खोतल्न थाल्छ। अनि उनीहरूले अर्को नाम राखिदिन्छन्।
उनीहरूलाई मलाई 'एन्टोनियो रूडिगर'बाट 'बर्लिन न्युकोलिन' नाम राखिदिए।
उनीहरूले भने, 'यो मान्छे एग्रेसिभ छ। यो मान्छे अझै काँचै छ। किनभने ऊ न्युकोलिनबाट आएको हो।'
यदि तपाईंले प्रशिक्षणका दौरान मैदानमा झगडा गर्नुभयो र तपाईं कुनै विशेष ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मिडियाका मान्छेहरूलाई प्रतिस्पर्धा भन्छन्। उसको नेतृत्व क्षमताको कुरा गर्छन्।
तर यदि तपाईं म आएकोजस्तो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने मिडियाले तपाईंलाई गुण्डा भनेर लेख्छ। अनि फुटबलका लागि घातक भनिदिन्छ।
हेर्नुस् त यो कसरी गढेको छ। उस्तै व्यक्ति उस्तै लेभलमा हुदाँ फरक व्यवहारको शिकार हुन्छ। अझ तपाईं इटालीजस्तो ठाउँमा आइपुग्नु भयो भने त उच्च तहको विभेद खेप्नुपर्छ। मलाई इटाली मनपर्छ। मलाई रोमा मनपर्छ। इटालीमा पहिलो पटक भेट्दा मान्छेहरूले अंगालो मार्छन्। म्वाँइ खान्छन्। साँच्चै यहाँ सुसंस्कार छ। तर मिडियामा भएका केही व्यक्तिहरूले यहाँ विभेदको खेती गर्छन्। र, यो साँच्चै हानिकारक छ।
मैले पहिलो पटक डर्बी डेला क्यापिटेला खेल्द लाजियो अल्ट्राससँग कुनै समस्या थिएन। कुनै विभेद थिएन। तर जब म दोश्रो पटक डर्बी खेल्न पुगें मलाई रिपोर्टरले इन्टरभ्यूमा लाजियो क्लबका म्यानेजर सिमोनी इन्जाहीबारे प्रश्न गरे।
मैले जवाफमा, 'म उनलाई खासै चिन्दिनँ। तर मैले सुनेको उसले क्लबका लागि राम्रो गर्दछन् रे' भनें।
मेरो भनाईको अर्थ म व्यक्तिगत रूपमा उनलाई चिन्दिनँ भन्ने थियो। तर पत्रकारले कुरा बंग्याइदिए। अनि उनले मैले इन्जाहीलाई आदर नगरेको रूपमा प्रस्तुत गरिदिए। मानौं मैले उनको बारेमा कहिल्यै नसुनेकोजस्तो गरी। उनले मात्र क्लिकका लागि आगोमा घ्यु खन्याउने काम गरे। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको मेसिनमा विषयवस्तु घुम्न थाल्यो। त्यसपछि म केही गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगें। जब खेलको दिन आयो। मलाई खलपात्र बनाइयो। त्यसपछि नै हो ममाथि रंगभेदी टिप्पणी वर्षिएका।
त्यसपछि नै हो जब कुनै रंगभेदी टिप्पणीबारे मलाई मान्छेहरू सोध्दा म हाँस्न थालेको। किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्नमा के जवाफ दिन्थें?
यसका लागि हामीले भित्रसम्म पुगेर हेर्नुपर्छ।
समर्थकहरू जब खेल हेर्दा रंगभेद गर्दै कराउँछन्। उनीहरूसँग भएका अरू समर्थकहरू के गर्छन्? उनीहरू केही नभएजस्तो गरी व्यवहार गर्छन्। कतिपय त हाँस्छन्। यसको अर्थ के उनीहरू पनि साथै छन् भन्ने हुँदैन र? के उनीहरू निर्दोष हुन्?
हामी खेलाडीहरू पनि यही सिस्टमको अंग हौँ। तर हामीले कतिपटक ड्रेसिङ रूममा यस्ता विषयमा गहिरो कुराकानी गरेका छौं? हामीले बिरलै कुराकानी गरेका होला। हामीलाई यस्ता विषयमा कुराकानी गर्दा कतै विषयवस्तु अन्तै मोडिने त हैन भन्ने चिन्ता हुन्छ। तर मलाई ताज्जुब लाग्छ हामी इन्स्टाग्राम, प्ले-स्टेसन, कारजस्ता विषयमा कुराकानी गर्दा भने विषयवस्तुबाट ध्यान मोडिएको मान्दैनौं।
हामीलाई किन यस्तो असहज हुन्छ? हामीलाई किन रंगभेदबारे छलफल गर्दा बेखुसी हुन्छ। कसरी हामीलाई खेलमा दबाब हुन्छ। जबकी अहिले नै पनि हामी खेलमा दबाब झेलिरहेका छौं।
अनि हामी के गरिरहेका छौं? हामी इन्स्टाग्राममा फोटो क्याप्सन लेखिरहेका छौं- रंगभेदलाई बहिष्कार गरौं।
बारम्बार इन्स्टाग्राममामा लेखेर हामी के-के न गरेको ठान्छौं। तर वास्तवमा हामीले केही गरिरहेका छैनौं। केही परिवर्तन भएको छैन।
यस्तो किन भइरहेको छ मलाइ थाहा छैन। र, यो पत्ता लगाउने काम पनि मेरो होइन। तर यसको स्वाद मलाई थाहा छ।
तपाईंहरूलाई लाग्न सक्छ म किन यस विषयमा बोलिरहेको छु। म वास्तवमा आफ्नो अनुभव बताइरहेको छु। मैले यो सिजन चेल्सीमा जे भोगें त्यसले पनि मलाई बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। चार महिनाअघि म झन्डै सक्किएँ भन्ने लागेको थियो। यदि तपाईंले अंग्रेजी पत्रिका पढ्नुभयो भने मेराबारे तपाईंले राम्रो सोच्नु हुने थिएन। म पनि मेरो बारेको बुझाई गलत भयो भन्न सक्ने अवस्थामा थिइनँ। मलाई त मान्छेहरूलाई मेराबारे केही थाहा छैन भन्ने लागेको थियो।
म त फगत एउटा नाम थिएँ। रूडिगर।
म त्यही थिएँ जे पत्रिकामा छापिन्थ्यो। सबै खराब भइरहेको थियो। मैले मैदानमा धेरै खेल्न पाइरहेको थिइनँ। म एउटा हरेक पटक असफलताको कारण मानिएको थिएँ। तपाईंहरूले मेराबारे यो सबै पढ्नु भएको हुनुपर्छ। मेरो कारणले म्यानेजरले कारबाही भोगे।
म सबैका लागि अलछिना भएको थिएँ।
त्यतिबेला मेराविरूद्ध जसरी सामाजिक सञ्जालमा लेखियो। त्यो वास्तवमै मेरा लागि हैरानी थियो।
मलाई लाग्दैन, अंग्रेजी पत्रिकाले मलाई म कहाँबाट आएको हुँ र मेरो छालाको रंग कस्तो छ भनेर आलोचना गरेको थिएन। तर यस्ता विषयमा किन लेखिन्छ भन्ने विषयमा हेर्न पूराना इतिहास सम्झनुपर्छ। ती पत्रिकामा लेखिएको विषयमा जति मेन्सन भएका छन्। त्यो साँच्चै अँध्यारो इतिहास हो।
हामी अनावश्यक हौं भनेर धेरै लेखिए। हामी पनि त मान्छे हौं। कुनै रोबोट होइनौं। तर विषयलाई त्यसरी हेरिएन। हामीलाई निकम्मामात्र भनियो। तर फेरि हेर्नुस् त पत्रपत्रिका कति छिटो बदलिन्छन्। चार महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा म निकम्मा थिएँ। तर अहिले हामी च्याम्पियन्स लिगको फाइलनमा छौं।
सबैका लागि यो पाठ हुनसक्छ। तर पाठ पढेमात्र हुँदैन। हामीले त्यसलाई बुझ्न जरूरी छ।
कति मान्छे सुन्न र बुझ्न तयार हुन्छन्?
कति मान्छेले मैले बोलेका शब्द विचार गर्छन् र त्यसको अर्थ पर्गेल्छन्?
मान्छेहरू भन्छन्- टोनी, तँ किन चिन्ता गर्छस्? यो त सामाजिक सञ्जालको ट्रोल हो। रियल मान्छे होइन।
यो साँच्चै हाँस्यास्पद हो। मलाई थाहा छ यसरी पोस्ट गर्नेहरू रोबोट हैनन्। तिनीहरू वास्तविक मान्छे हुन्।
जनवरीमा मलाई दुर्व्यवहार गर्नेहरू पछिल्ला हप्ताहरूमा मसँग क्षमा माग्दै म्यासेज गरिरहेका छन्।
के उनीहरूले आफ्नो अन्तरआत्माको कुरा सुने? के उनीहरूले आफूलाई शिक्षित तुल्याए? के उनीहरूले लामो समयसम्म ऐनामा हेरेर आफूलाई नियाले?
हुनसक्छ। अथवा नहुन पनि सक्छ।
तर मलाई के थाहा छ भने हामी जित्दैछौं। अहिलेका लागि उनीहरूका लागि कामको मान्छे भएँ। हुनसक्छ ती मान्छेहरूको नजरमा म मान्छे भएँ कि!
मेरो हृदयमा कसैका लागि घृणा छैन। तर म एउटा कुरा जरूर भन्न चाहन्छु। यदि तपाईंले भित्रैदेखि मसँग क्षमा माग्नु भएको हैन भने मलाई तपाईंका त्यस्ता क्षमा माग्दै गरिएका ट्विट नपठाउनुस्।
मोबाइलबाट टाढा बस्नुस्। ट्विट गर्न छाड्नुस्।
बरू पढ्नुस्। कालाजातिका मान्छे माथि भएको विभेदको इतिहास पढ्नुहोस्। अनि खुला दिमागले संसारभरका मानिसहरूलाई हेर्नुस्। यो वास्तवमै मलाई ट्विट पठाउनुभन्दा ठूलो कुरा हुनेछ।
म कुनै आदर्शको अपेक्षा गरिरहेको छैन। म रातारात कुनै परिवर्तनको अपेक्षा गर्दिनँ। म फुटबल विश्वलाई ४८ घन्टाभित्र रंगभेद अन्त्यका लागि एक ठाउँमा आउन पनि भन्न सक्दिनँ।
हामी यो रंगभेदको विषय सामाजिक सञ्जालको अभियान वा लेख लेखर अन्त्य गर्न सक्दैनौं।
तर म आशावादी छु। म यो लडाइँ निरन्तर लड्ने छु। सधैं। मलाई थाहा छ विश्वमा त्यस्ता मान्छे पनि छन् जसलाई यस्ता विषयमा साँच्चै चिन्ता छ। मलाई थाहा छ, मलाई मान्छेले साँच्चै सुन्नेछन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, १८:०९:००
बोलिभियालाई हराउँदै चिली शीर्ष स्थानमा